Sei uchigamuchira katsi | Noti Katsi
Sei uchigamuchira katsi
Makati ane furry ayo, kunyangwe hazvo vanhu vachiwedzera kugara nevamwe vavo, nanhasi vachiri mhuka dzinosiiwa zvakanyanya. Munzvimbo dzekuvanda uye mudzimba mune hupenyu hwakawanda hwesango urikutsvaga mhuri inovada, kwete kwemwedzi mishoma, asi nekusingaperi.
Nekudaro, pachine chikonzero chekusimudzira kuzivisa nezve iro basa rekuve nemukadzi pamba. Ivo vanobvumidzwa kuve nemarara vasingazive kuti ruzhinji rweavo kitsi dzinopedzisira dzagara mumigwagwa. Naizvozvo, kubva pano isu tichaita zvishoma nekukuudza sei kutora katsi.
1 Ivo vane rusununguko kupfuura imbwa
2 Vanofarira kutamba uye kunakidzwa
3 Inobatsira pahutano
4 Unoponesa hupenyu
Ivo vane rusununguko kupfuura imbwa
Makati ane hunhu hwakazvimiririra kupfuura imbwa. Kana vaine chikafu, mvura, tirasi yemarara, uye mumwe munhu wekushanyira kuti avachengete nguva nenguva, unogona kuenda kuzororo kwemazuva mashoma. nekuti iwe unoziva kuti hapana chichaitika kwaari.
Ehe, usambokanganisa kuzvimiririra nekusave nehukama. Idzi mhuka dzinoda kusangana nemhuri dzadzo; Ivo vanofanirwa kukomberedzwa uye kukwambirwa zuva rega rega. Uyezve, kana uchifanira kupedza nguva yakawanda usiri pamba, zvirinani kuva nekatsi mbiri pane imwechete.
Vanofarira kutamba uye kunakidzwa
Kunyanya kittens. Chero chinhu chinofamba kana chinogona kufamba chinokwezva kuda kuziva kwako. Vanonakidzwa nekutamba, chimwe chinhu chavachaite nechinhu chekutanga chavanowana: bhora, tambo, mhuka yakaputirwa, ... kunyangwe nekadhibhokisi bhokisi ivo vachave nenguva yakanaka. Ivo vane hanya kwazvo uye havazeze kuongorora yavo nharaunda vachitsvaga kunakidzwa.
Kuchenesa kune kudzikamisa mhedzisiro, kwete chete pane katsi, asiwo pane isu. Inoderedza kushushikana, kushushikana uye kusarara, Kutibatsira kurara zvirinani. Uye hazvireve kuti kupuruzira kati, kana kungoiona ichirara, kunogona kukurudzira.
Kugamuchira katsi kuri kuponesa hupenyu hwesadza. Matumba nedzimba dzakazara nekatsi nembwa dzakasiiwa. Kupa katsi imba chikonzero chakakosha kwazvo kutora.
Iwe unoziva here zvimwe zvikonzero nei zviri nani kutora? 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Sei uchigamuchira katsi
Kuchengeta sei bvudzi rekatsi
Kutanga riini kubaya kati?